Ukudibana nenani elikhulu lezinto zongquzulwano.
Ikhaya > iimveliso > DataNumen Exchange Recovery > Ukudibana nenani elikhulu lezinto zongquzulwano
Ukudibana nenani elikhulu lezinto zongquzulwano kuTshintshiselwano OST ifayile
Udibana nenani elikhulu lezinto zongquzulwano kwi ifolda engaxhunyiwe kwi-intanethi (.ostifayile.
Impazamo ithetha ukuba OST ifayile yonakele okanye yonakele.
Ukusombulula le mpazamo kunye nokuthintela ukulahleka kwedatha, nceda ulandele amanyathelo angezantsi:
Vala iMicrosoft Outlook kunye nezinye iinkqubo ezinokufikelela kwifayile ye- OST ifayile.
Fumana OST ifayile ebangela impazamo. Unokumisela indawo ekuyo ifayile esekwe kwipropathi eboniswe kwi-Outlook. Okanye sebenzisa i ukufuna ukusebenza kwiWindows ukukhangela ifayile ye OST ifayile.
Ukufumana kwakhona idatha engaxhunyiwe kwi-intanethi OST ifayile. The OST Ifayile iqulethe idatha engaxhunyiwe kwi-intanethi, kuquka i-imeyile kunye nazo zonke ezinye izinto, kwibhokisi yakho yeposi yokuTshintshisa, eyi-most ukubaluleka kuwe. Ukugcina ezi datha, kuya kufuneka ukusebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukuskena ukonakala OST fayile, buyisa idatha kuyo, emva koko uzigcine kwifayile ye-Outlook PST engenazimpazamo ukuze ukwazi ukufikelela kuzo zonke ii-imeyile kunye nezinto ezikwi-Outlook ngokulula nangokufanelekileyo.
Ukugcina eyokuqala OST ifayile. Ngenxa yokhuseleko, kungcono uyigcine.
Qamba ngokutsha okanye ucime eyokuqala OST ifayile.
Lungisa impazamo. Qinisekisa ukuba useto lweakhawunti ye-imeyile yokutshintsha kwi-Outlook ichanekile, kwaye i-Outlook inokuqhagamshela kwiseva yakho yoTshintshiselwano ngempumelelo. Emva koko restart Jonga kwaye uthumele / ufumane ii-imeyile zakho kwibhokisi yeposi yoTshintshiselwano ehambelanayo, eya kuthi yenza i-Outlook yenze entsha OST Ifayile ngokuzenzekelayo kwaye ungqamanisa idatha yayo nebhokisi yeposi kwiseva yoTshintshiselwano Ukuba le ndlela ayisebenzi, iprofayile yakho yangoku ye-imeyile ayichanekanga, kuya kufuneka uyicime kwaye wenze entsha, ngolu hlobo lulandelayo:
6.1 Vala iMicrosoft Outlook.
6.2 Cofa Start, uze ucofe Iphaneli yokulawula.
6.3 Cofa Tshintshela kwiMbonakalo yesiqhelo ukuba usebenzisa iWindows XP okanye iinguqulelo eziphezulu.
6.4 Cofa kabini iposi.
6.5 Kwi Ukuseta Imeyile ibhokisi yencoko, nqakraza Bonisa iinkangeleko.
6.6 Khetha enye yeeprofayili ezingachanekanga kuluhlu kwaye ucofe Susa ukususa.
Phinda 6.7 de zide zonke iinkcukacha ezingachanekanga zisuswe.
6.8 Cofa Yongeza ukwenza iprofayili entsha kwaye ungeze iiakhawunti ze-imeyile ngokwezakhelo zazo kwiserver.
I-6.9 Start Imbonakalo kunye nokulungelelanisa kwakhona ibhokisi yemiyalezo yokutshintshiselana, uya kuyifumana ingxaki inyamalala.
Ngenisa idatha efunyenwe kwinqanaba 3. Emva kweyakho OST ingxaki yefayile imisiwe, gcina entsha OST ifayile yebhokisi yokutshintsha yeposi evulekileyo, emva koko uvule ifayile yePST eveliswe kwinqanaba lesithathu nge-Outlook. Njengoko iqulethe yonke idatha efunyenweyo kwindawo yakho yoqobo OST ifayile, unokukopa izinto ezifunekayo kwifayile yakho entsha OST ifayile.